Nzira yekuwana nekuisa maapplication paApple Watch | IPhone nhau
Nzira yekuwana nekuisa maapplication paApple Watch
Kana isu tagamuchira chishandiso chitsva, senge Apple Watch, chinhu chekutanga chatichaita, zvine musoro, kutora kufamba kuburikidza neiyo interface kuti tizvizive neiyo nyowani system. Chinhu chinotevera chatichaita kutanga wedzera zvese zvinoshandiswa zvatinozoshandisa zuva nezuva. Muchirongwa ichi tinotsanangura maapplication akaiswa sei paApple Watch.
Maitiro, senguva dzose nezvose zvine chekuita ne smartwatch yekambani yeCupertino-based, ichave inozivikanwa kwatiri kana isu tatova ne iPhone kana iPad. Uye, kuti zvitibatsire, basa rinoitwa kubva pachiratidziro chakakura.
Isu tinovhura iko kunyorera Apple Watch pane yedu iPhone.
Takatamba pa Yakaiswa o kutsvaka pazasi.
Isu tinotsvaga chero chishandiso iyo yatinoda kuisa sezvataizoita nechero application ye iPhone.
Takatamba pa Wachi yangu.
Takatamba mune kushandiswa.
Shandisai chisarudzo Ratidza app paApple Watch.
Sezvauri kuona, iyo system yekuisa maficha paApple Watch yakafanana nehurongwa hunoshandiswa pane iyo iPhone, nemusiyano uyo isu tichafanirwa kutaurira iyo iPhone kuti ndeapi maficha atinoda kuona pane smartwatch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nzira yekuwana nekuisa maapplication paApple Watch
naMwari mirira kusvikira tava newachi diki yandisingazive kuti sei maitirwo akawanda kudai isati yatengeswa kuSpain
Damn ndanga ndichizotaura zvakafanana naAntonio ...
Chaizvoizvo, ndiri kufara kwazvo kuti vapepeti vane wachi yeapuro yatove ... Asi zvinosuwisa, vazhinji vevashanyi vewebhusaiti ino, kana isiri 90%, isu hatina iyo fucking wachi .... Saka ndokumbirawo, dzimwe nhau nezve iyo iPhone, uye zvishoma nezve iyo Kurinda ... kuti nguva dzese dzandinoona imwe, zvinondiita kuti ndide kumira kuenda kuno kusvikira iyo Apple Watch yabuda muSpain.
Huya, ndatenda huh!
Siri anogona kukubatsira uye tinokuratidza kuti sei